Tidaidzei: + 86-791-85761682
Nzira yekusiyanisa uye kushandisa yekuzvipfekedza mbatya uye zvekurapa zvinodzivirira zvipfeko
Maitiro ekusiyanisa zvipfeko zvekuzviparadzanisa kubva kuzvipfeko zvekudzivirira zvekurapa uye kuti ungazvishandisa sei zvakanyanya mune chokwadi chekuti chipfeko chekudzivirira chekurapa chinogadzikana, chakakwirira chekudzivirira uye kuita kwekudzivirira kuri nani pane kupfeka kwekuzviparadzanisa nevamwe. Pamusoro pekusangana neiyo wear req ...
Ndeipi yemberi nzvimbo yemusika yemachira eChina asina kurukwa?
1. Nzvimbo yemusika yemangwana yemachira asina kurukwa yakakura nekukura kuri kuita hupfumi hweChina nekuwedzera kwemari yevagari, chinodiwa cheindasitiri isina kurukwa hachina kusunungurwa zvizere. Semuenzaniso, musika wemapeniki ehutsanana uye manapukeni evana akafara kwazvo, iine ...
China indasitiri isina kurukwa inobuda munzira yehunhu
Isiri yakarukwa machira imhando nyowani yezvakatipoteredza zvekuchengetedza zvinhu, inozivikanwawo seisinawovens, ine hunyoro-chiratidzo, inofema, inochinjika, kurema uremu, isiri kupisa, nyore kuora, isina-chepfu uye isingatsamwise, rakapfuma ruvara, mutengo wakaderera, unogadziriswazve uye mamwe maitiro. Iyo mhando isiri ...